Fitifirana nafaty ny mompera Nicolas: nampiaka-peo ny kardinaly sy ny arseveka | NewsMada
Par Taratra sur 19/02/2019
Tsy faly tanteraka. Nampiaka-peo ny kardinaly Tsarahazana Desiré manoloana ny tifitra ka nahafaty ny mompera Nicolas, tetsy Mahitsy ny herinandro teo. Samy namatrampatratra avokoa izy ireo, manoloana tsy filaminana sy tsy fandriampahalemana tsy eny anivon’ny fiangonana ihany.
“Tahaka ny tany tsy misy fanjakana eto…Manameloka tanteraka izany ny eveka….”, hoy ny ampahan’ny lahateniny tany Fenoarivo Atsinanana, ny alahady teo. Mbola nanamafy izany ny eto anivon’ny diosezin’Antananarivo, amin’ny alalan’ny Mgr Razanakolona Odon, omaly. “Hametraka fitoriana izahay…”, hoy izy tetsy Andohalo, omaly. Nohitrikitrihiny fa tsy afaka ny hangina ny fiangonana amin’ny nahafaty io pretra io noho ny herisetra sy ny tsy fandriampahalemana. Niaiky rahateo ny arseveka fa mihanaka ary mahazo ny sokajin’olona sy sehatra rehetra izany fa tsy hoe ny eo anivon’ny fiangonana ihany. Notsindriny fa efa niharan’izany koa ny mpiasa eo anivon’ny fahasalamana, ny mpampianatra, ny mpandraharaha amin’ny alalan’ny asan-dahalo, ny fakana an-keriny… “Endriky ny tsy fandriampahalemana sosialy izany…”, hoy ihany izy.
Miray tendro amin’ny jiolahy sy ny dahalo…
Notsiahiviny avy eo ny fanambaran’ny Fivondronamben’ny eveka (Fem) ny volana mey 2017 amin’ny filazana fa mamatsy basy sy bala ny dahalo ny mpitandro filaminana amin’ny firaisana tsikombakomba. Ny fakana vola amin’ny mpamily eny an-dalana, ny fampihorohoroana ny tantsaha…“Fadio ny fakana an-keriny… Mahaiza mionona amin’ny karama nomena anareo. Tadidio ny velirano: “ho an’ny tanindrazana hiaro ny aina sy ny fananana”. Efa nampaneno lakolosy ny eveka tamin’izany. Mbola mampahatsiahy izany izahay izao na ekana aza fa tsy izahay irery ny mahare maharary”, hoy ihany ny Mgr Razanakolona Odon.
Notifirina indroa sy nohitsahina…
Notsikerain’ny avy amin’ny Justice et Paix avy eo ny fomba fiasa na koa ny tsy fahombiazan’ny fitandroana ny filaminana. Ny fahataran’ny famaliana ny antso vonjy, ny olan’ny fitaovana, ny fitaterana, ny halavitry ny toerana, ny fifandraisana… “Tsy ny mpitandro filaminana rehetra akory ny manao izany… Ilaina ny fifanomezan-tanana mba hipetrahan’ny fiadanana sy ny fandriampahalemana”, hoy izy. Namintina fohy nitantara ny tranga niseho nahafaty ny mompera Nicolas ny vikera jeneraly, ny mompera Rabenatoandro Ludovic, ka nanitrikitrika fa tena niniana notifirina ity pretra ity. “Tsy hoe voatifitra tsy nahy noho ny bala very. Notifirina avy ao an-damosina sy nohitsahina ary mbola niverenana notifirina indray koa ny ilany ankavia”, hoy izy.